Wararka Maanta: Talaado, Sept 11, 2012-SHARIIF SHEEKH AXMED: "Natiijada doorashada waa mid aan ku qanacsanahay waana la shaqeyn doonaan xukuumadda Soomaaliya"
Shariif Sheekh oo muddo saddex sano iyo bar ah madax ka ahaa dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya ayaa looga adkaaday wareeggii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynimo, isagoo ka mid ahaa 21 murashax oo xilka looga guuleystay.
"Natiijadii doorashada waan aqbalay, waxaana horay dhowr jeer u sheegay inaan aqbali doono natiijo walba oo doorashada kasoo baxda, wayna iga go'an tahay inaan la shaqeeyo dowladda la dhisayo," ayuu yiri Shariif Sheekh.
Madaxweynihii hore wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in dowladdii uu hoggaaminayay ay dalka soo gaarsiiso heer la is-dooran karo, wuxuuna sheegay in wax walba oo talo ah oo la iiga baahdo uu dhiibi doono, balse uusan noqon doonin mid dowladda sanka ka ka geliya taladiisa.
"Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud," ayuu yiri Shariif Sheekh oo sheegay in wixii maanta ka dambeeya uu ku wareejin doono xilka dalka madaxweynaha la doortay.
Xasan Sheekh ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii saddexaad oo si xor ah loogu doorto Muqdisho tan iyo markii ay xorowday Soomaaliya, waxaana madaxweynayaashii ka horreeyay: Aadan Cabdulle Cismaan iyo C/rashiid Cali Sharma'arke oo labadaba geeriyooda lagu doortay gudaha dalka iyadoo ay doorteen baarlamaannadii Soomaaliya.